Dhageyso: Hoggaamiyaha Jabhada Aara ee Somaliland oo bixiyey wareysi xasaasi ah | Somali Info
Dhageyso: Hoggaamiyaha Jabhada Aara ee Somaliland oo bixiyey wareysi xasaasi ah
Boorama (Caasimada Online) ― Suldaan Abuubakar Cilmi Wabar, oo hogaamiya Jabhad si weyn uga soo horjeeda xukuumada Somaliland ee uu hogaamiyo Madaxweyne Muuse Biixi, ee loo yaqaan Aara ayaa maanta bixiyey wareysi xasaasi ah oo uu kaga hadlay arrimo dhowr ah.
Suldaan Wabar ayaa sheegay in ugu horeyntii ay xukuumadu aysan marnaba dhag jalaq u siinin tabashadoodii, taasina ay sii xoojisay dagaalka ka dhanka ah Xukuumada haysa talada Somaliland.
Suldaanka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xukuumada Somaliland ay isku deyday in ay gacanta ku soo dhigto, isla markaana ay disho, balse ay u suurto gali weyday, waa sida uu ka dhawaajiyey.
Wabar ayaa waxa kale oo uu sheegay inuusan marnaba waxba ka sugeyn hogaamiyaha ugu sareeya Somaliland ee Muuse Biixi, maadama uu qarka u saaran yahay in uu kala dareeriyo beelihii Hargeysa, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Suldaan Wabar ayaa waxa uu rajo la’aan weyn ka muujiyey in uu Madaxweyne Biixi keeni karo isbedel xal u noqon kara tabashadiisa iyo Jabhada uu hogaaminayo ee ka dagaalanta gudaha gobolka Awdal.
Suldaanka ayaa ugu dambeyntiina waxa uu xusay in ay Jabhadiisu aysan dooneyn in ay burburiso magaalada Boorama oo ay dhowreyso, balse ay dagaal kula jirto xukuumada ay sida weyn uga tabanayaan ee Muuse Biixi.
Hoos ka dhageyso hadalka Suldaanka
SOURCE: Dhageyso: Hoggaamiyaha Jabhada Aara ee Somaliland oo bixiyey wareysi xasaasi ah